Sample Blog Page - MPM AIT Myanmar
C.E 70.11 Project Cost and Financial Management အသုံးစရိတ်နဲ့ ဘဏ္ဍာငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဟာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် Project Manager ကောင်း တစ်ယောက်ဟာ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု ကုန်ကျစရိတ်တွေကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ဒီလိုအရေးပါတဲ့ Project Cost and Financial Management အကြောင်းကို MPM Program မှာ လေ့လာသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် =============================== 2021 Intake ကိုလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် 🎓 APPLICATION DEADLINE 31 July 2021 🎓 INTERVIEW 31 August 2021 🎓 OPENING 1 October 2021 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့အတွက် …
C.E 70.11 Project Cost and Financial Management Read More »
Project Management ဆိုင်ရာ အခမဲ့ Online Webinar (အမှတ်စဉ် ၂) 🏗 ဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ်မှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြတဲ့ အင်ဂျင်နီယာများ၊ စီမံကိန်းမန်နေဂျာများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Online Webinar Series များကို MPM Program မှ စီစဉ်ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ် ယခုတစ်ခေါက် အမှတ်စဉ် ၂ Online Webinar မှာ ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ “𝐎𝐯𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐨𝐟 𝐎𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲 & 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 (𝐎𝐒𝐇𝐂𝐈𝐌) – 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 (𝐏𝐭𝐃) 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚” ဖြစ်ပါတယ် 🧑‍🏫 ဆွေးနွေးပို့ချမည့်သူ Dr. Mazlina …
Project Management ဆိုင်ရာ အခမဲ့ Online Webinar (အမှတ်စဉ် ၂) Read More »
🏗 ဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ်မှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြတဲ့ အင်ဂျင်နီယာများ၊ စီမံကိန်းမန်နေဂျာများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Online Webinar Series များကို MPM Program မှ စီစဉ်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ယခုတစ်ခေါက်မှာ ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ “Current Development and Trend of Lean Construction” ဖြစ်ပါတယ် 🧑‍🏫 ဆွေးနွေးပို့ချမည့်သူ Prof. Bonaventura H.W. Hadikusumo MPM Program Coordinator ⏱ အချိန် မတ်လ ၅ ရက်နေ့၊ မနက် ၈:၃၀ နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန်) တက်ရောက်လိုသူများအနေနဲ့ အောက်ပါ Link မှာ ဝင်ရောက်၍ Registration ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် https://forms.gle/dQwgHams1rc9FYhh9
2022 August Intake
MPM Program မှာ သင်ယူရမယ့် ဘာသာရပ်တွေဖြစ်ပါတယ် ⭐️ MPM Program ဆိုတာကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ Asian Institute of Technology (AIT) က ဖွင့်လှစ်သင်ကြားတဲ့ Professional Master in Project Management (with specialization in Construction Project) ဘွဲ့လွန် (၁) နှစ် Program ဖြစ်ပါတယ် ⭐️ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင် စာတွေ့လက်တွေ့ မျှတအောင် ပေါင်းစပ်သင်ကြားပေးတဲ့ Program ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ်မှာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသူတိုင်း တက်ရောက်သင့်ပါတယ် MPM Program 2022 August Intakes အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ ==========•••••========== အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက …
2022 August Intake Read More »
2022 Intake ကိုလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် 🎓 APPLICATION DEADLINE 31 July 2022 🎓 INTERVIEW 31 August 2022 🎓 OPENING 1 October 2022 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်မြို့အတွက် ဒေါ်ချယ်ရီမြင့် (Administrative Officer) Tel. (09) 796 500 086 Email: [email protected] ​နေပြည်​တော်အတွက် ​ဒေါ်ချိုဇင်အောင် (Senior Program Officer) Tel. (09) 420 773 902 Email: [email protected] မန္တလေးမြို့အတွက် ဒေါ်ဝင့်ဝါဦး (Junior Program Officer) Tel. (09) 791 814 670 …
2022 Intake Read More »